Posted by ညီနေမင်း on 10:37 PM with7comments
၀ဘ်ဆိုက် အပ်ချင်သူများ nyinaymin.org@gmail.com ကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်. လိုချင်တဲ့ Design၊ website အမျိုးအစားနဲ့ ထည့်ချင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကိုတော့ မေးလ်နဲ့ပို့ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်. ၀ဘ်ဆိုက်ကို အဆင်လဲပြေ ဈေးနှုန်းလဲ ချိုသာအောင်လို့ အနည်းဆုံးဈေးနဲ့ ရေးပေးနေပါတယ်. အားလုံးကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်. Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook
Saw KyawOctober 13, 2011 at 12:18 AMသိပ်ပြီး ကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်တခုပါ။ အလုပ်အပ်ချင်သူများအတွက်ရော ပညာကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ကူညီချင်နေကြသူများ အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေသွားတာပေါ့။ နောက်ပြီး မားသားဘုတ် လောင်တုံးကလို ရပ်ထားရတာမျိုး အရင်ဆိုက်အဟောင်းက လိုငွေအခက်အခံကြောင့် ဖြစ်သွားရတဲ့ အဖြစ်မျိုးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။ReplyDeleteအချိုင်းOctober 13, 2011 at 12:59 AMအေး ညီလေးရေ အကိုတို့အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်မြန်မာပြည်မှာ သင်တန်းတွေ ကော မဖွင့်သေးဘူးလားညီအကိုတို့လေ့လာအားပေးမှာပါ လာရောက်သင်တန်းတက်ချင်ပါတယ် နည်းပညာလက်ပူးလက်ကျသင်ယူချင်ပါတယ် ညီလေးရေ အကိုတို့ ကတော့ သိပ်လေးစားတယ် သိပ်အားကျတယ်ReplyDeletehone tharOctober 13, 2011 at 11:22 AMသိပ်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ပါ။ လေးစားလျက်ပါ။ReplyDeleteသားသားOctober 17, 2011 at 1:42 PMအဲလိုဖြစ်သင့်တာကြာပြီ..အားပေးတယ်..လှည့်မကြည့်နဲ့ကျနော်တို့ရှိတယ်...ReplyDeleteရဲထွန်းOctober 19, 2011 at 2:40 PMလှည့်ကြည့်လိုက်......၊သားသားနဲ့ အတူကျနော်ဒို့ လဲရှိတယ်(ရဲထွန်း)ReplyDeletewelcomeOctober 23, 2011 at 9:30 PMအားပေးပါတယ်ဗျာ။ ကိုညီနေမင်းတို့လိုလူမျိုးတွေ မြန်မာပြည်မှာ အများကြီးရှိသင့်ပါတယ်။ ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိရင်လည်း ဆိုက်ပေါ်မှာရေးထားပေးပါနော်။ ကူညီချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တော့ pay pal မရှိသေးဘူး။လေးစားလျှက်၊ ကျော်၊ စင်္ကာပူReplyDeletethuyaJuly 18, 2012 at 8:36 PMအစ်ကို ညီနေမင်း ခင်ဗျာpaypal က us sanction ကြောင့် မြန်မာပြည်ကို ပိတ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ကျွန်တော် က မော်တော်ဆိုင်ကယ် accident ဖြစ်ပြီး ခြေထောက်ကျိုး ထားတာကြောင့် ခြေ ထောက် မသန်တော့ပါဘူး။အဲဒါကြောင့် အိမ်နေရင်း online က၀င်ငွေရှာလို့ ရတဲ့ အလုပ်တွေရှာနေတာပါ။paypal အကောင့်လုပ်ပုံလုပ်နည်းနှင့် verified လုပ်နည်း withdraw လုပ်နည်း များရှိရင်သိချင်ပါတယ်။ လေးစားစွာဖြင့်သူရReplyDeleteAdd commentLoad more...